China Hemiplegic Walker Yese Kugadzirwa Kwevakuru uye Fekiti | Hongzhu
Zvivakwa Kuvandudza Therapy Supplies
Feature Zvinogona kuchinjika, zvinotakurika, uye zvinoshandisika, zviri nyore kusangana
Ruvara Sirivheri neblue, orenji, dema
* yakapetwa kairi mhando mhando, inogona kugadzirisa hupamhi zvichienderana nemarble, yakakodzera muviri wakasiyana.
* yakanyorova polymer chipanje mabhata, akasununguka uye kwete-kutsvedza, hapana kukuvadza kune muviri.
* Yakagadzirwa neakakwira-yakasimba aluminium alloy
* iyo kureba kweanenge achifamba anogona kuchinjiswa
* simbisa danda kuti isimbise chimiro uye yakasimba, nemutoro unorema we100kg.
* 360-degree inotenderera universal vhiri, yakachengeteka uye iri nyore kudzora
* yakakwira density sponge cushion, yakagadzikana, yebhuruu cushion chifukidzo, inobvisa kuchenesa.
* yakagadzika nhema nhema PU chigaro chinobvumira vanhu kuwana zororo kunyangwe vakaneta
* anodzora anofamba ane kumashure uye mavhiri emavhiri akachengeteka pane akajairwa anofamba.
* anti-rollover bracket nemavhiri zvinogona kubviswa
* humanized wheel design, iine mabhureki, akakodzera vanhu vasina simba rakawanda.
* Zvakanakisa zvipo zvevakuru uye shamwari dzakaremara. Vadzoreredze kunze kwekunze.
* Kugadziridzwa kwakakwirira
* Kufamba wakasununguka
* Maviri axillaries daro rinogona kuchinjika
* Mawiricheya mabhureki anoshanda
* Infusion inobata chubhu
* Tsoka zororo zvigaro